२०७७ वैशाख महिनाको राशिफल
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य
आर सी थारु नगर अस्पतालमा प्रसुती सेवा लिनजाँदा कर्मचारीले दिन्छन अनावश्यक दुख
एक लाख म्यादी प्रहरीमा खुल्यो भर्ना
सांसद बानियालाइ बलात्कार आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय १५ गते सम्मका लागि बन्द
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको स्थापना दिवसमा विविध कार्यक्रम सम्पन्न
नारायणगढ देखि महेन्द्रनगर जाँदै गरेको बस बर्दिया मा दुर्घटना, ९ जना घाइते(हेर्नुहोस को को भए घाइते नाम सहित)
पोखरा र बुटवल पछि नेपालगन्जमा पनि स्टेसनको ज्योती मगरद्वारा भयो उद्द्घाटन
बारबर्दियामा नेपाल बन्दको प्रभाब उच्च
अंगद श्रेष्ठ बामदेब गौतम राजनीति पदम ढकाल बारबर्दिया बर्दिया
ज्यो. पंडित नारायण प्रसाद २ बैशाख २०७७, मंगलवार २१:०६
वैशाख महिना समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । इच्छा र आकाङ्क्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । परिवार संग रमाइलो भेटघाट हुनेछ । महिनाको उत्तरार्धबाट महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । तनाव बढेको महसुस हुनेछ । व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने र कार्यमा बाधा आउला । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,५ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो महिनामा तपाईंको राशिबाट बाह्रै भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले त्यति राम्रो फल मिल्नेछैन । खर्चको मात्रा बढ्नेछ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउला । महिनाको अन्त्यमा सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । कुटुम्बबाट विशेष सहयोग मिल्ने र नयाँ योजना बन्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,५ र शुभ रङ्ग सेतो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । स्वास्थ्य प्रति सजक रहन आवस्यक छ । प्रेमी / प्रेमिकाका बिच खिन्नता बढ्नेछ । नाक तथा घाँटीमा समस्या आउला । मध्य महिनामा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । घर ,जग्गा खरिद तथा बिक्रिको योग छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग पहेँलो वा हरियो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व गणेशजीको स्मरण गरी कार्य गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
यो महिनामा तपाईंको राशिबाट पाँचौ भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले राम्रो फल मिल्नेछ । प्रेमिको सहायोग पाईनेछ । सन्तानबाट सुख मिल्ला । कृषि क्षेत्रमापनि सफलता मिल्नेछ । नजिकको व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि सूर्य भगवानको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
वैशाख महिनामा सामाजिक कार्य अघी बढ्नेछ । ठुला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । कला र गलाको प्रभाव बढ्दै जानेछ । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । ब्यापार ब्यबसायबाट आम्दानी हुनेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,८ र शुभ रङ्ग हरियो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता नवग्रहको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो महिनामा तपाईंको राशिबाट आठौ भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले विविध समस्या आउन सक्छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्नेछ । व्यर्थको सास्ति खेप्नु पर्नेछ । १५ गतेबाट समय राम्रै रहला । ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,६ र शुभ रङ्ग हल्का हरियो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाकालीजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरु सम्पन्न हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । विशिष्ट व्यत्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । महिनाको अन्त्यमा लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,५ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विष्णुभगवानको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वैशाख महिनामा बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । जोश,जाँगर र हिम्मत बढ्ला । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सेवा मूलक कामबाट सुख, शान्ति र सफता मिल्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,२ र शुभ रङ्ग कालो वा हरियो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
धनु ( ये,यो,भा,भि,भु,धा,फा,ढा,भे)
यो महिनामा अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । सजिलै अरुको बिश्वास जित्न सकिनेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागिपनि श्रेष्ठ समय छ । सामाजिक र राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा औसत लाभ हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,४ र शुभ रङ्ग सेतो वा घ्यूरङ्ग हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवालयको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । ठुला व्यक्तिले तपाईको मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । नयाँ उद्योग वा रचनात्मक कार्यको योजना बन्नेछ । रोकिएका काम पुनः सुरु हुन सक्छन् । २२ गतेबाट राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ६,८ र शुभ रङ्ग निलो वा खैरो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्यबाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो महिनामा आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन तर महत्त्वकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकार्यको सम्भावना छ र त्यसबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्नेछ । लगनशीलताले कामहरु अगाडी बढ्नेछन । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,७ र शुभ रङ्गे रातो वा पर्पल हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि महालक्ष्मीजीको स्मरण गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वैशाख महिनामा छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक / सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । मध्य महिनाबाट आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग गुलावी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रा गर्नु अघि शिव भगवानको स्मरण / दर्शन ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा राम्रो हुनेछ ।
१ बैशाख २०७७, सोमबार १४:४४
१ बैशाख २०७७, सोमबार १५:२२
१ बैशाख २०७७, सोमबार १५:३७
१ बैशाख २०७७, सोमबार १५:२३
१ बैशाख २०७७, सोमबार १४:३३
२०७७ साल जेष्ठ महिनाको राशिफल
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १३:२९
२९ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०९:०६
४ फाल्गुन २०७८, बुधबार २३:४७
११ माघ २०७८, मंगलवार ०९:२३
खोज नेपाल न्युज, दर्ता नं. : १५८३ (सूचना बिभाग)
प्रकाशक : याल्ड मून ग्रुप प्रा.लि. , बारबर्दिया न.पा.-८ ,बर्दिया
सम्पर्क नम्बर ९८५८०५२८७५
सम्पादक : अशोक के.सी.
सम्पर्क नम्वर : ९८५८०२५८५८
फोटो पत्रकार : यशु के.सी.
© Copyright 2022, Yaldmoon Group (P) Limited, All Rights Reserved | Website by: Rara Consulting and IT Solution Pvt. Ltd.